अष्ट्रियामा आफ्नै तीन सन्तानको हत्या गर्ने नेपाली महिला को हुन् ? किन यस्तो गरिन् ? – Dcnepal
प्रकाशित : २०७७ कार्तिक २ गते १३:२९
काठमाडौं। अष्ट्रियामा एक नेपाली महिला आफ्नै तीन सन्तानको हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ परेकी छिन् । उनले शनिबार आफ्ना तीन सन्तानको हत्या गरेपछि आफैं प्रहरीलाई खबर गरेकी थिइन् । उनले घटनास्थलमा प्रहरी आएपछि आफैंले आफ्ना तीन सन्तानको हत्या गरेको बताएकी थिइन् । ती महिलालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
घटनास्थलमा प्रहरी पुग्दा महिला स्वयं पनि घाइते थिइन् । उनले आफ्नै हात काट्ने प्रयास गरेको हुन सक्ने चोटको प्रकृतिले देखाएको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय मिडियाले लेखेका छन् । उनले पनि आत्महत्या गर्ने प्रयास गरेको पृष्ठभूमिले पनि उनलाई यस्तो अपराधतर्फ मानसिक तनावले उक्साएको अनुमान गरिएको छ ।
उनले आना नौ वर्षीय छोरी, तीन वर्षीय छोरी र आठ महिने छोराको हत्या गरेको बताएकी छिन् । प्रहरी उनी बसेको अपार्टमेन्टमा पुग्दा तीन वर्षीय बालिका र आठ महिने बालकको ज्यान गइसकेको थियो तर नौ वर्षीय बालिकाको सास चल्दै गरेको पाइएकोले उनलाई तत्काल अस्पताल लगिएको थियो तर अस्पतालमा उनको ज्यान गयो ।